बनायो चीनले विश्वकै नम्बर वान बुलेट ट्रेन, प्रतिघण्टा ४ सय किलोमिटर गुड्ने (भिडीयो सहित)
विश्वकै तीव्र गतिको बुलेट ट्रेन,एक पटकमा ५ लाख ६ हजार यात्रुलाई सेवा प्रवाह
| 2017-08-27 Published
निर्माण सञ्चार, एजेन्सी | विश्वकै तीव्र गतिमा गुड्ने बुलेट ट्रेन चीनले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सन् २००८ मा बेइजिङदेखि सांघाइसम्मको यात्रामा ४० जनाको ज्यान जानेगरी दुर्घटनाग्रस्त भएको सो बुलेट ट्रेन पुनः चिनियाँ बजारमा विश्वकै तीव्र गतिमा गुड्नसक्ने गरी सञ्चालनमा आएको हो ।
विश्वमै नयाँ पुस्ताको बनाइएको फुजिङ नामको उक्त रेल प्रतिघण्टा ४ सय किलोमिटरको गतिमा गुड्नेछ ।
सो नामको ट्रेनलाई चिनियाँ इन्जिनियरहरुले पहिलो पटक आफ्नै डिजाइनमा बनाएका हुन् ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार पश्चिमाको लगानी र इन्जिनियरबिनै बनाएकोले यसलाई पहिलो तीव्रगतिको ट्रेनको नाम दिइएको हो ।
चिनियाँ कम्पनीले ट्रेन बनाउनमा १३ वर्षको अनुभवलाई प्रयोग गरि पहिलो पटक विश्वकै तीव्र गतिको र नम्बर वान बुलेट ट्रेन निर्माण गरेको छ ।
यसअघिका विकसित मुलुक जापान, फ्रान्स, जर्मनी र क्यानाडाले भने यस्तो प्रकारका ट्रेन निर्माण गरिसकेका छन् ।
उक्त ट्रेनले सांघाइदेखि बेइजिङ जाँदा एक पटकमा ५ लाख ६ हजार यात्रुलाई सेवा प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरेको रेलवेले जनाएको छ ।
तिव्र गतिको यो फुजिङ ट्रेन हाल २ मोडेल सीआर ४०० एफ र सीआर ४०० बीएफ रहेका छन् ।
यस सीआर ४०० एफ मोडेलको ट्रने वेइजिङको दक्षिणी रेलवेस्टेशनबाट स्थानीय समय अनुसार ११ बजेर ५ मिनेटमा खुल्नेछ भने सोही समयमा सीआर ४०० बीएफ मोडल भने सांघाइको हंककाइ रेलस्टेशनबाट बेइजिङका लागि छुट्ने पिपुल्स चाइना डोलीले जानकारी दिएको छ ।
सो ट्रेनमा यात्रा गर्ने प्रतिघण्टाको गतिमा यात्रुले ४ सय किलोमिटर यात्रा अनुभव लिन पाउनेछन् । चीनले यसअघि सन् २००८ मा ३५० किलोमिटर प्रतिघण्टा कुद्ने टे«न सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
आइतबार, ११ भदौ २०७४
कर्णालीकै पहिलो रोप–वे, सुरु भयो कि ‘क्रान्ति’ ! ४ घण्टाको काम ५ मिनेटमै सरर !
सुदूरपश्चिमको भूस्वर्ग बडिमालिकाः बादल पारि रहेको परीको देश !
ठप्प भो रसुवागढी नाका– ४ सय बढी मालबाहक गाडी रोकिँदा पनि सरकारको गएन ध्यान !
कर्णालीकी ‘रानी’ रारा ! समृद्धिको शंखघोष गरेका प्रधानमन्त्रीको किन अझै गएन ध्यान ?
मृगौला पीडितलाई ग्रील व्यवसायीद्वारा आर्थिक सहयोग
खारेज भयोः ६० कन्ट्रयाक्टरको ठेक्का लाइसेन्स, कुन कुन हुन् ? नामसहित
इन्जिनियर्स असोसिएसनले गर्यो विशिष्ट पदका इन्जिनियरहरुको सम्मान
‘दुध र भात’ खाएजस्तै कर्मचारी र ठूला ठेकेदारबीच सेटिङ हुँदो रहेछ ! यसलाई अब तोडिन्छ– प्रचण्ड
प्रधानमन्त्रीसँग निर्माण व्यवसायीको भेटः कन्ट्र्याक्टर मात्र दोषी देख्ने ब्युरोक्रेसीलाई सच्याउन आग्रह
लेखे केही होला !